iinyanga 1 kunyaka 11 eyadlulayo #360 by Dariussssss
Lo mntu kufuneka ibe umbuzo elula kakhulu ... okanye mhlawumbi hayi. Mna fan Airbus, Ndiyavuma ukuba. Yaye ekubeni ukudibana yam yokuqala moya Sims, ukuba umenzi ndiza ozithandayo wam. Ngoko ke, e FGFS, FS2004 kwaye ngoku FSX, kukho phantse na elungileyo nethembekileyo Airbus moya. Kukho iinqwelomoya payware kodwa nje awunayo imali.
Umbuzo ngulo: Kwenzeka ntoni ngezinye sims ezimbini, X-Plane kunye P3D, ukuba ukho na ukusebenza ngokupheleleyo freeware Airbus ngenxa na kubo?
Ingxaki ephambili mna kunye Airbus moya, ingakumbi Thomas Ruth A330 / 340 kunye PA A380 e FSX kukuba PFD zingekhoyo enye into elula. LAS tape aliveli zombini overspeed kunye asesitalini, kwaye moya kuyo self akukho kuyothusa kuyo. Akukho ndlela ukuze ibhabhe kakuhle. Kwaqengqeleka iinyanga ndizama ukufumana uncedo enye into kuloo kodwa akukho namnye, lonke uluntu FSX ufuna ukuba andincede.
A320 multi-livery pack, lukhona apha Rikoooo iyamangalisa, yaye bonke ndifuna kukudlulisela kwezinye izinto, ngathi PFD ukuya iinqwelomoya ezikhankanywe, okanye ubuncinane ukuya TR A330. Ebuzwa yonke indlela yokuyenza ... kwaye ulahle ixesha lam.
Ukuya emva FGFS ngokwenene na ukhetho yam yokugqibela kodwa ndiya ngovuyo kwenza ukuba akukho esinye ukhetho.
iinyanga 1 kunyaka 11 eyadlulayo #367 by Gh0stRider203
Ukuba akukho nto ebonisa ngayo, usenokuba ube nako ukuhlela ifayile aircraft.cfg ukulungisa oko. Mna okunene ke kwafuneka enze ukuba i-CLS DC-10-30F. Baya shorted kuwe 4.5K eelitha zamafutha, kwaye bazifinyeza ubunzima gross max kakuhle apha ngezantsi oko enyanisweni.
isibini ukulungisa kwifayile aircraft.cfg yaye oko kufuneka ibe njani. ngoku ukubhabha iindiza max-uluhlu akukho ngxaki
iinyanga 1 kunyaka 11 eyadlulayo #369 by Dariussssss
Nje ebonisa oko, yaye kwifayile cfg, isantya asesitalini kwizivumelwano yenzeka ... 120 kts? Nje khangela ezinye moya igqampe ividiyo kwi YT kwaye ubone ukuba ngokusenyanisweni phakathi 155 kunye 160, ngoko e 120 ... uya ziphelela iindaba.
Ndiza kuzama ukuba, ukuze uqiniseke.
iinyanga 1 kunyaka 11 eyadlulayo #371 by Gh0stRider203
I ngob 'ukuba ujonge kwi ifayile cfg My Dash-8 kwaye qinisekisa ukuba ngumtya kufuneka luqulathe ekunene cuz Andenzi nkqu ukuba bangasondeli kuluhlu max ngaloo ngumtya yaye loo nto akukho kanye zokunceda lol
Asikwazi ukuba amafutha mda xa saphaphazela kunye nokuchitha yee-umoya kugxekwa.
iinyanga 1 kunyaka 11 eyadlulayo #372 by Dariussssss
Aircraft developers s ... g us ....
iinyanga 1 kunyaka 11 eyadlulayo - iinyanga 1 kunyaka 11 eyadlulayo #373 by Gh0stRider203
luck Good yokufumana Me ukuba iphikisane nawe ngaloo Lmao enye
Ya uyazi ukuba usaya Nice ukuba xa abantu benze ezi moya for Flight Sim kona okunene benze uphando f'in 'kuqala ya uyazi ???? >.>
Ndicinga ukuba ndiza kuhamba ngomlilo ezinye imingxuma esibhakabhakeni Mach 2 kwi Concorde. HAYI IZITHEMBISO andiyi nemicimbi i iinqaba ezimbalwa endleleni lol
Uhlobo lokugqibela: 1 unyaka we-11 inyanga edlulileyo Gh0stRider203.
iinyanga 1 kunyaka 11 eyadlulayo #386 by Dariussssss
Ndiyacinga, abo ababhekisi, bekuya kuba yanele ukuba ukuthetha nje abaqhubi ekhoyo ehlabathini.
Malunga A340 wam PFD Iingxaki ... kakuhle kulula ukutshintsha ezinye amaxabiso kwifayile moya .cfg, kodwa utshintsha nto. I PFD aliveli zombini overspeed kunye esibayeni., Ngoko ndiyaqikelela ukuba tye. Oko kumele ukuba itshintshwe kwenye kwi-VC okanye panel iifayile kwaye akukho unakekelwa indlela yokuyenza.
I oko mad ngenxa yoku, ukuba okunene efakiweyo FGFS kunye A346 ... nkqu ukuphoxeka kakhulu, asikwazi nokuba ukuqala khona apho, ngoko buyela FSX kwaye nzima ukulungisa ukuba PFD.
iinyanga 1 kunyaka 11 eyadlulayo #387 by Colonelwing
ngelixa mzuzu ukuphoxeka umzabalazo ,, ,,, kukho into entle yonke le ,,, ozifundayo.
akusoloko kulula ukufunda kobu bomi wayo ,, ndiyavuma ,, kodwa ingqesho izama kwakho nzima ukusombulula ingxaki,
kwaye oko ngendlela eya umzuzu succesful ukuza ...
iinyanga 1 kunyaka 11 eyadlulayo #389 by Dariussssss
Hey Colonelwing, yintoni phezulu?
Kaloku, hayi ukusebenza ngaloo ndlela nam, ubuncinane kungekhona Air Sims. Ukuba into ayisebenzi nto iya ngqo emgqomeni. Musa ufuna ukuchitha naliphi ixesha kunye luvo kuyo.
Ebomini, uyavuma ukuba ubomi bam yonke kunzima, kodwa loo nto omnye ibali, akuyi kuba natyala ngale ndawo.
iinyanga 1 kunyaka 11 eyadlulayo #392 by Gh0stRider203
kakuhle, nonke nina unayo ngenene ukuba uyenze khangela Wikipedia xa kuziwa moya info, ngokunyanisekileyo ... ubuncinane zorhwebo.
Ixesha ukwenza page: 0.556 imizuzwana